«Can 2021» – voalohany ao amin’ny sokajy K : Notototoin’ny Barea 6 no ho 2 ny Menas-n’i Niger | NewsMada
Mihorohoro i Afrika iray manontolo. Nanoto sady nandaka ary nanamontsana ny Menas-n’i Niger, tao an-kianjany, indray mantsy ny Barea de Madagascar, eo amin’ny fifanintsanana hiadiana ny “Can 2021”. Mitarika amin’ny isa enina ny Malagasy.
Nanakoako eran’i Afrika indray, halina, ny lazan’i Madagasikara. Nentin’ny Barea niakatra ambony be mantsy ny baolina kitra malagasy. Nomontsaniny, tamin’ny isa mavesatra 6 no ho 2, teo anatrehan’ny mpijeriny, ny Menas-n’i Niger. Fihaonana notanterahina tao amin’ny kianja Nyamey ary tafiditra amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana, ho an’ny “Can 2021”.
Na teo aza ny fijaliana sy ny olana nolalovan’ny Barea de Madagascar, nihazo an’i Niger, navadiky ry zalahy ho hery sy tanjaka izany.
Ry zareo Menas no nanokatra ny isa, teo amin’ny minitra faha-5, tamin’ny alalan’ny “coup francs” matin’i Amadou Wonkoye. Nosahalain’i Bolida izany teo amin’ny minitra faha-9, taorian’ny fitapitaka nataon’i Paulin, ary nanolotra ny baolina ho azy.
Tsy nijanona teo anefa izany fa nitohy ny fanafihan’ny Malagasy. Nandrindra izany i Caloin sy i Anicet ary i Amada. Nanidy ny trano kosa ry Mombris nampian’i Morel sy i Fontaine ary i Metanire. Nanao izay ho afany ny Menas, saingy tsy afa-nandingana mihitsy. Nanampy ny isa indray i Bolida, teo amin’ny minitra faha-26. Nampian’i Abel Anicet, tamin’ny “penalty”, izany teo amin’ny minitra faha-35.
7 mn tsy hialana sasatra, nampiditra ny baolina fahefatra ho an’ny Barea de Madagascar i Carolus.
Nifona sy nandohalika ny Menas
Fidirana faharoa, nitohy hatrany ny fampisehoan-kery nataon’ny Barea de Madagascar. Tsy nionona tamin’io isa efatra io ry zalahy fa mbola nanampy ny isa teo am-pelatanany indray. Minitra faha-54, nahazo tolotra tsara avy amin’i Mombris i Voavy Paulin, izay nandaka nandrivorivo, ary nampiditra ny baolina fahadimy.
Nanomboka nifona sy nilavo lefona ary nandohalika ny Menas-n’i Niger. Vokatr’izay, mbola nampiditra ny baolina fahenina i Jeremy Morel, taorian’ny “corner” nodakan’i Carolus. Na izany aza, nanampy baolina iray ry zareo Niger, teo amin’ny minitra faha-76, tamin’ny alalan’i Mossi Issa Moussa. Mitarika ao amin’nyvondrona K ny Barea, izay manana isa 6. Vokatra hafa, ho an’ity sokajy ity, resin’ny Etiopia, tamin’ny, isa 2 no ho 1 tao an-kianjany, ny Elefantan’i Côte d’Ivoire.